UZwane ubanike ithuba lokuzibonakalisa, abangamphoxa abadlali beChiefs - Impempe
UZwane ubanike ithuba lokuzibonakalisa, abangamphoxa abadlali beChiefs
Ukushaya kukaLeboganga Manyama amagoli amathathu, ukuzethemba kukaWillard Katsande ejika amadoda amathathu eyedwa, nokushelela kukaNkosingiphile Ngcobo. Lezi ngezinye zezinto ezihlale obala ngesikhathi iKaizer Chiefs ibuya seyilandela ngemuva kuze kube kabili ishaya iGolden Arrows ngo 3-2 nfoLwesithathu kusihlwa.
Lokhu kuzimpawu zokuthi izinto sezijikele kuMakhosi akhombe indlela obengumqeqeshi, uGavin Hunt osekuvele ukuthi ubesexakazisene neningi labadlali. Mhalwumbe yingakho nemiphumela beyingasabonakali nje.
UKatsande uke wakuveza ngasekuqaleni kweviki ukuthi imiphumela iqhamuka uma abadlali bekujabulela ukudlala. Sekuyacaca ke ukuthi bese begcina icala ngesikhathi sikaHunt. Yingakho ke nabaphathi bebonile ukuthi abangabe besananaza, bamkhombisa isango angena ngalo.
Umqeqeshi obambile, u-Arthur Zwane, uthe yena akukuningi akwenzile, kodwa ubanikeze ithuba lokukhombisa ukuthi kungani bekuleli qembu elithandwayi zindimbane zabalandeli.
“Wonke umdlali uma engena enkundleni usuke efuna ukuzibonakalisa, avelele. Nangesikhathi sizicija ejimini sibatshelile ukuthi amaphutha ayenzeka ebheleni, ngakho asilindele bangabi namaphutha,” kusho uZwane ngemuva komdlalo we-Arrows.
Lo mdlalo bekungoka-29 kwiDStv Premiership futhi ibikudinga ukuwina ukuze iziqhelelanise nezindaba ezifaka izembe phakathi. Ikwenzile ke lokhu futhi manje seyingabheka ukuthi ngeke yini yenzeke inhlanhla ungene ingasabhekiwe kwiTop 8.
“Sibatshelile ukuthi okubalulekile wukuthi uvuka kanjani ulungise ngemuva kokwenza iphutha. Besifuna badlale ngenkululeko futhi bazibonakalise. Kodwa lokho umuntu engazenzelie ngayedwana, kodwa akwenzele ukusiza iqembu.
“Yilokho okusisebenzelile. Kuyajabulisa ukubona abadlali bebuyelwa ukuzethemba, bekholelwa kwithalente labo. Thina njengethimba eliqeqeshayo sizobeseka, sibakhombise indlela efanele,” kusho uZwane.
Amakhosi azoyivala ngeTS Galaxy isizini ngoMgqibelo. Oluhehayo ngalo mdlalo wukuthi elizohlulwa kula maqembu lizosala ngaphandle kweTop 8. Uma iChiefs inqoba kulo mdlalo, iyangena nakanjani. Uma yehluliwe, noma idlale ngokulingana, izosala ngaphandle.
Previous Previous post: Uchomele ababekusola ukuqashwa kwakhe, wathi usengu ‘Makhathini ibutho likaZulu’ uMcCarthy
Next Next post: Usemincele ukuba iSwallows yenze edume ngakho uDa Gama weGalaxy osaba iChiefs